Qashin Qubka Iyo Xaarka
Qashin Qubka Iyo Xaarka Ropo waa is-dheellitirka is-dheellitirka boodboodka iyo diirka, oo aan weligiis dhulka ku dhicin. Thanks to culeyska yar ee haanta biyaha ku yaal qeybta hoose ee qashin-qubka, Ropo nafsigeeda si dabiici ah ayey isugu dheelitiran tahay. Kadib markay si dhib yar u daadiyaan ciidda iyagoo kaashanaya dibnaha tooska ah ee qashin qubka, adeegsadayaashu way iskudhidi karaan xaaqinka iyo qashin qubka waxayna iskaga dhigi karaan hal unug iyada oo aan walwal laga qabin inay weligood hoos u dhacaan. Foomka casriga ah ee dabiiciga ah ayaa ujeedadiisu tahay inuu si fudud u keeno meelaha gudaha ah isla markaana muuqaalka ruxista leh ayaa damacsan inuu ku raaxeysto isticmaaleyaasha inta ay nadiifinayso dhulka.
Kursi Kursiga gacanta ee Baralho wuxuu leeyahay naqshad casriyeysan oo ka kooban qaabab saafi ah iyo khad toosan. Waxay ka samaysan yihiin laalaab iyo alwaax saqaf leh aluminium burush ah, kursi gacmeedkani wuxuu u taagan yahay geesinimo geesinimo leh oo caqabad ku ah xoogga qalabka. Wuxuu awoodaa inuu iskugu keeno, hal shey, qurux, nugul iyo saxnaanta xariiqinta iyo xaglo.
Dukaanka Flagship Lenovo Flagship Store ayaa ujeedadeedu tahay kor u qaadista sumadda sumcadda iyadoo la siinayo dhagaystayaasha meel ay ku xiriiraan isla markaana wadaagaan qaab nololeed, adeeg iyo waaya-aragnimo lagu abuuray gudaha dukaanka. Fikradda naqshadeynta ayaa loo qaatey iyadoo lagu saleynayo ujeeddada si loo hirgaliyo kala-guurka ka yimaada kombiyuutarka soo-saaraha aaladda u soo saarta astaanta hoggaanka u fidisa macaamiisha elektaroniga.
Qashin Qubka Iyo Xaarka Kursi Dukaanka Flagship Sumadda Khamriga Baakadaha Cabitaanka Fudud Nidaamka Miiska Furan